Resaky ny mpitsimpona akotry : mahay na inona na inona | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : mahay na inona na inona
Par Les Nouvelles sur 13/01/2017
Mazàna fampitandremana no fototry ny hevitra fonosin’ ny fampianarana azo raisina avy amin’ny ohabolana sy karazana hain-teny izay vokatry ny fandinihana navelan’ny razana ho lova entina iatrehana ny fiainana izay manana ny lalàny. Raha raisina avy amin’ny hain-teny, izay vakoka manatevina ny harena fototra mitory ny toe-tsaina sy rary iankinan’
ny fomba fiarahamonina, dia ankafizin’ireo teo aloha ny fandravahana ny fomba fiteny mba sady ho fahafinaretana no tsy hanohintohina amin’ny fivantambatanana ny fihenoana azy. Indraindray anefa dia tsy misorona ny fitenenana ary tsy miolakolaka fa tena mahitsy. Ho an’ny olona matetika mikavivia eo am-panaovana izay ataony no tonga ilay fitenenana hoe tsy mahay na inona na inona. Nefa angamba azo itarina izany ka ampiasaina ho fandrabirabiana ireo miseho ho tapi-pahaizana mahavita “na inona na inona”. Ny hajejoana dia tafiditra ao amin’izay karazana fiteny izay ihany koa ny “tsy maha hendry”.
Ireo fomba fiteny roa ireo “tsy mahay na inona na inona” sy “tsy maha hendry” dia ahatsapana ny maha lohalaharana ny fanetren-tena eo am-panatanterahana adidy sy andraikitra ary ny fahazotoana amin’ny tsy fitsitsina ezaka anefana izany. Tsy ny fahambonian’ny toerana misy ny tena sanatria no ahafahana miala amin’izany ka hiseho ho “mpahay” an’
izao rehetra izao ary dia hanilika andraikitra hiantsorohan’ny sasany fotsiny. Efa nilaozan’ny toetrandro ny fanandevozana. Raha misy azo ho lazaina ho mpanompo amin’izao fotoana izao dia ireo tsy noterena tsy novozonana fa ireo nanolo-tena ary nitolona mafy mihitsy noho ny fitiavan-tanindrazana mba hahazo anjara eo amin’ny fanompoam-pirenena.
Hafa ny momba ireo mpiasam-panjakana izay tsy maintsy misedra fifaninanana ho fandanjana ny mari-pahaizany mba hahafahany misahana ny asa eo amin’ny sokajy misy azy. Hafa kosa ny andraikitra raisin’ny olom-boafidy izay manolotra ny fahendreny eo amin’ny fanefany adidy ho antoka voalohany amin’ny tsy handaniany andro amin’ny fieboeboana sy amin’ny familiana ny fahefana omena azy ho fanjakazakana sy fanaovana tetika maizina ahafahana mifikitra eo amin’ny toerana ka hisitrahana arak’izay ela azo atao ireo tombotsoa mitobaka. Samy mahita ny mpijery, samy mandini-tena ny olom-boafidy tsirairay raha mitoetra ny fanetren-tena ho mpanompo sy ny fahendrena entina ifehezana ny fitantanana.
Photo du jour le 01 Avril 2020 01/04/2020
Amboasary Atsimo : la sécurisation révisée 01/04/2020
Mandritsara : des rumeurs sur le coronavirus 01/04/2020
Don au CCO-Covid 19 Ivato : la Star offre 1 million de bouteilles d’eau 01/04/2020
Ravitaillement des marchés : 190 tonnes de riz livrées dans la capitale 01/04/2020